‘तुच्छ सजाय’का लागि खेम भण्डारी पक्राउ, एक घण्टा कैद, एक रुपैया जरिवाना – MySansar
‘तुच्छ सजाय’का लागि खेम भण्डारी पक्राउ, एक घण्टा कैद, एक रुपैया जरिवाना
Posted on November 19, 2019 November 19, 2019 by Salokya
कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले ‘तुच्छ सजाय’ तोकेका पत्रकार खेम भण्डारीलाई मंगलबार दिउँसो पक्राउ गरिएको छ। उनलाई अदालतले तोके बमोजिम एक घण्टा कैद गर्नका लागि कारागार लगिएको छ। अदालतले तोकेको एक रुपैयाँ जरिवाना उनले बुझाएका छन्।
निर्मला प्रकरणलाई ट्विस्ट एन्ड टर्न गरी रहस्यमय घटनाका रुपमा प्रचार गराई भिआइपी अपराधीको हौवा खडा गर्ने प्रमुख पात्र खेम भण्डारीलाई कन्चनपुर जिल्ला अदालतले ‘तुच्छ सजाय’ दिएको छ। अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै उनलाई ‘तुच्छ सजाय’का रुपमा एक रुपैयाँ जरिवाना र एक घण्टा जेलको सजाय न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले असार ३० गते सुनाएको हो। के हो त यो ‘तुच्छ सजाय’ भनेको? अदालतको व्याख्या पनि रोचक नै छ।